UDkt Danyela Demir nencwadi yakhe entsha.
Umfundi owenza iziqu zobodokotela esiNgisini eSikoleni SobuCiko uDkt Danyela Demir ubhale ngokuhlanganyela incwadi esihloko sithi: Tracing the (post)Apartheid Novel Beyond 2000. UDkt Demir welulekwa ngocwaningo nguSolwazi Lindy Stiebel.
Lencwadi, eshicilelwe yi-UKZN Press nebhalwe ngokuhlanganyela noDkt Olivier Moreillon, yethulwe e-Ike’s Bookstore ku-Florida Road eThekwini.
Kuyona kuqukethwe izingxoxo nabalobi besimanje baseNingizimu Afrika abali-14 o-Mariam Akabor, uSifiso Mzobe, u-Fred Khumalo, uFuthi Ntshingila, u-Niq Mhlongo, uZukiswa Wanner, uNthikeng Mohlele, uMohale Mashigo, u-Lauren Beukes, u-Charlie Human, uYewande Omotoso, u-Andrew Salomon, u-Imraan Coovadia no-Fred Strydom.
Izingxoxo nababhali zihambisana nemifanekiso yezimpilo zabo neziqeshana zezincwadi zabo.
‘Ngokuvumela abalobi bathinte futhi bahlaziya inkundla yemibhalo abayingxenye yayo nabayenzayo, siyaphuma ekujuleni kokuhlaziya izincwadi. Lokhu kwenza incwadi into ewusizo ezifundisweni nalabo abangezona izifundiswa abathanda izincwadi zesimanje zaseNingizimu Afrika,’ kusho u-Demir.
Ababhali babheka amagama namatemu achaza isikhathi samanje ezincwadini zaseNingizimu Afrika, njengezincwadi ezingemva koshintsho nezincwadi ezibhalwe ngemva kowezi-2000.
Lencwadi ineqhaza elimqoka kwinkulumompikiswano ngokubhala kwesimanje eNingizimu Afrika. Ngaphezu kwalokho, i-Tracing the (Post) Apartheid Novel beyond 2000 ihlose ukufundisa ngezi“khondlakhondla” ezinjengo-Andre P Brink, u-JM Coetzee, u-Nadine Gordimer noZakes Mda, abadume ezweni naphesheya, nesizukulwane sababhali abasha nabancane abanganakiwe kuyaphi.
U-Demir, oneziqu zobudokotela zase-University of Augsburg eJalimane, ungumcwaningi owenza iziqu zobudokotela e-UKZN.
Imonografi yakhe ethi Reading Loss: Post-Apartheid Melancholia in Contemporary South African Novels, yashicilelwa ngowezi-2019.
Useke washicilela izindaba ngo-K Sello Duiker, u-Marlene van Niekerk, uKgebetli Moele no-Sarah Penny, kanti useke wahlela ushicilelo lwephephabhuku i-BKO i-Horns for Hondo at 30, olugxile emsebenzini kaLesego Rampolokeng.
Umsebenzi omusha ka-Demir ubizwa ngokuthi Writing Against a Loveless World: In Search of Black Consciousness in Selected South African and Middle Eastern Texts.
Incwadi yakhe entsha iyatholakala ngobuchwepheshe besimanje nasezitolo zezincwadi ezinkulu.
Izithombe: nguCedric Sissing